घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू Matheus Cunha बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो माथियस कुन्हाको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
यो म्याथियस कुन्हाको जीवन कहानीको उनको शुरुको दिनदेखि नै प्रसिद्ध बनेको संक्षिप्त प्रस्तुति हो। तपाईंलाई बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवन र क्यारियरको प्रगतिको चित्रण सार हो।
मैथियस कुन्हा जीवन कथा।
हो, सबैलाई थाहा छ उनी हर्थाको सबैभन्दा शुभ खेलाडी हो। यद्यपि केही व्यक्तिहरूले उनको जीवनी पढेका छन् जुन अत्यन्त आकर्षक रहेको छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मैथियस कुन्हा बाल्यकाल कहानी:
बायो स्टार्टर्स को लागी, उनको उपनाम Mateo हो। मैथियस सान्तोस कार्नेरो दा कुन्हा ब्राजिलको जोओ पेसोआमा मे १ of 27। को २th तारिखमा जन्मेको थियो। उहाँ आफ्नो आमा लुजियाना कुन्हा, र आफ्नो बुबा, कारमेलो कुन्हामा जन्मनुभएको थियो।
म्याथियस कुन्हाका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्।
मैथियस कुन्हा परिवार मूल:
लुजियाना र कार्मेलोको छोरो पूर्ण रक्ताको ब्राजिलियन हो। वास्तवमा भन्ने हो भने, उनीसँग दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा पारिवारिक जरा स्थापित छ, जुन यसको आइकनिक कार्निवल उत्सव र प्रतिभाशाली फुटबल ताराहरू जस्ता उत्कृष्ट रूपमा चिनिन्छ। Pelé र रोनाल्डो डी लिमा.
मैथियस कुन्हा बढ्दो वर्ष:
जोओ पेसोआ मूल निवासी आफ्नो जन्मस्थान मूर्तिमा हुर्केका थिए रोनाल्डिन्हो र पोडोलस्की। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, ऊ बच्चाको रूपमा आजीवन पर्याप्त खेलहरू हेर्थ्यो र फुटसल खेल्नको लागि केही चीज थियो।
ऊ जोओ पेसोआका निवासी हो।
मैथियस कुन्हा परिवार पृष्ठभूमि:
माटेओका अभिभावकहरू उनको प्रारम्भिक फुटबल सment्लग्नतासँग खुसी थिए। यद्यपि उनीहरूले पक्का गरे कि यसले जीवनको अन्य पक्षमा उसको विकासमा अवरोध खडा गरेन। कुनहाको परिवारले बुझेको तरिका, माटेओ र उनकी दिदी मारियाहको लागि उत्कृष्ट शिक्षा फुटबलको विकास जत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो।
म्याथियस कुन्हाको उनकी बहिनी मारियाको बाल्यकालको फोटो।
यसका अतिरिक्त मध्यमवर्गीय परिवार आरामसँग बस्न थाले र म्याथियस कुन्हा र उनको बहिनीको भलाइको खोजी गरे। वास्तवमा, अगाडी पछाडि रहेको थिएन जब उनले उल्लेख गरे:
"म एक बच्चा थिएँ जो मलाई आवश्यक सबै कुराको साथ बढेको थियो, मलाई केही कुराको अभाव थिएन।"
कसरी करियर फुटबल मैथियस कुन्हाको लागि सुरु भयो:
व्यापक गलत सूचनाको विपरीत, अगाडिको यात्रा कोरीटिबाबाट शुरू भएन। वास्तवमा, उनले स्थानीय क्लब काबो ब्रान्कोबाट शुरू गरे। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यो एक क्लब थियो जुन उनका बुवाले पनि खेलेका थिए! त्यस पछि, कुन्हा रेसिफेमा आधारित क्लब - सीटी बार्यो गए।
उसको सुरुको क्यारियरको समयमा सबैको सहयोग थियो।
क्यारियर फुटबल मा मैथियस Cunha प्रारम्भिक वर्ष:
यो १ forward वर्ष नपुग्दासम्म उनी करीतिबामा सामेल भए। उनी क्लबमा कसरी आइपुगेको कुरा सम्झँदै कुन्हाले नोट गरे:
"एक व्यापारीले मेरो फुटबल मन पराउँथे र बुबासँग मिलेर मलाई कोरिटिबा लगे।"
पराना आधारित क्लबमा, कुन्हाले चार बर्षसम्म आफ्नो उमेर ओगटेका थिए र करियरको तयारीमा उनको जुत्ता राखे जसले उनलाई ब्राजिलको किनारबाट टाढा लैजान्छ।
तब किशोर-किशोरीले हेर्नुहोस् के उसले के गर्ने राम्रो गरी जान्दछन्।
मैथियस कुन्हा जीवनी - रोड टू फेम स्टोरी:
वास्तवमा, स्विस क्लबका प्रतिनिधिहरू, सियोनले अगाडिको प्रतिभालाई ध्यान दिए र उनको स्थानान्तरणको लागि सम्पर्क गरेपछि तयारीहरू चुक्ता गरियो।
“जब मेरो प्रबन्धकले प्रस्ताव र युरोपमा मेरो क्यारियर सुरु गर्ने सम्भावनाको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, मैले दुईपटक सोचेन। वास्तवमा मलाई युरोपियन फुटबलमा खेल्ने ठूलो इच्छा थियो। ”
शुरुमा, नयाँ महाद्वीपमा बसोबास गर्नु त्यतिबेलाको १ year बर्षे उमेरको लागि गाह्रो थियो। यद्यपि उनी अनुकूल हुनमा छिटो भए र कडा प्रतिस्पर्धाको खोजी गर्न थाले। वास्तवमा, कुन्हाले सियोनसँग २०१ one मा आरबी लाइपजिगमा सामेल हुनु अघि केवल एक वर्ष बिताए।
उनले रेड बुल लाइपजिगमा कडा प्रतिस्पर्धाको अनुभव गर्न सकेनन।
म्याथियस कुन्हा जीवनी - फेम टु फेम स्टोरी:
भाग्यवस, Rb Leipzig युवा मानिसहरु मा धेरै सट्टेबाजी को दर्शन छ, र Mateo यसको अपवाद थिएन। तिनीहरूले उसलाई एक प्लेटफर्म दिए आफूलाई प्रमाणित गर्न र उत्कृष्ट क्रेडिट राम्रो संग आफ्नो क्रेडिट मा राम्रो। वास्तवमा, २०१२ मा बायर लेभेरकुसेनको बिरुद्ध उनका उत्कृष्ट टु .्गो २०२० को बुन्देस्लिगा गोल हो। साथै, यो फिफा पुस्कास पुरस्कारका लागि मनोनयन पनि थियो।
माथियस कुन्हाको बाल्यकाल कहानी र जीवनीमा यो टुक्रा लेख्दा, स्ट्राइकर हर्था बीएससीसँगै छन् जहाँ उनी आफ्नो राम्रो फार्मको जारी राख्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दृश्य मा, उहाँ ब्राजिलको लागि सफल छ जहाँ स्ट्राइकरहरू फिर्मिनो र येशू असफल भएका छन्। यो क्लब र देशको लागि एक सम्पत्ति हो र आश्चर्य काम गर्न जारी हुनेछ भनेर बिना यो जान्छ। जुनसुकै तरिकामा चीजहरू उसको लागि झुकाव हुन्छन्, बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हुनेछ।
म्याथियस कुन्हा प्रेमिका / पत्नी हुन को हुनुहुन्छ?
यस स्ट्राइकरले केहि जीनियस मध्ये एक हो जुन दुबै मैदान र आउटफिल्ड जित्दछ। उहाँसँग एक धेरै राम्री प्रेमिका मंगेतर बनेको छ। उनको नाम गेब्रिएला Nogueira हो। उनी रियो दि जेनेरियोको मूल निवासी हुन् र एक वकिलको रूपमा काम गर्छिन्। जहाँसम्म हामी सम्झन सक्छौं गब्रिएला कुन्हासँग रहेकी छिन्। वास्तवमा, उनी एक हुन् जसले उनलाई युरोपमा आउँदा बसोबास गर्न मद्दत गरे।
तिनीहरूको प्रेमको वास्तविकता को बारे मा कुनै प्रश्न छैन। तिनीहरू जताततै जान्छन् र सँगै लगभग सबै कुरा गर्छन्। उनीहरुका एक छोरा छन - लेवी २०२० मा जन्मेका होलान् क्रिसमस को लागी विवाह प्रस्ताव? पाठ्यक्रम को गैब्रिएला। यो अचम्मको कुरा हो कि स्ट्राइकरले उनलाई आफ्नी पत्नी बनाउने योजना गरेका छन्।
माथियस कुन्हा आफ्नो मंगेतर गेब्रिएला र छोरा लेवीसँग।
मैथियस कुन्हा परिवार जीवन:
लुजियाना र कार्मेलोको छोरा कुनै श doubts्का छैन जुन एक आश्चर्यजनक फुटबलर भएकोमा मन पराउँछन्। तथापि, त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसले उहाँलाई प्रेम गर्दछ उसको भन्दा बाहिर। तिनीहरू उसको परिवार हुन्। हामी तपाईलाई म्याथियस कुन्हा परिवारको बारेमा तथ्य ल्याउँदछौं। हामी यहाँ उनीहरुका दाजुभाइहरु र आफन्तहरु बारे तथ्यहरु पनि बनाउनेछौं।
म्याथियस कुन्हा फादरको बारेमा:
Carmelo Cunha आश्चर्यजनक समर्थन बुबाको नाम हो। ऊ पराíबाको हो। पहिले भनिएझैं ऊ फुटबलर हुने गर्थ्यो। उनीसँग एक शिक्षकको रूपमा काम गर्ने ईतिहास पनि छ। Cunha सधैं उत्तेजित र प्रोत्साहित गर्न को लागी अद्भुत बुबा। उहाँ बुबाको एक आदर्श मोडेल हुनुहुन्छ।
म्याथियस कुन्हाको बाल्यकालको तस्वीर उसको बुबासँग।
म्याथियस कुन्हा आमाको बारेमा:
लुजियाना कुन्हा हडताल गर्ने उस्तादकी आमाको नाम हो। उनी ब्राजिलको पर्नामाम्बुको हुन्। २०१ 2019 मा, उनी आफ्नो छोरा ब्राजिलमा राष्ट्रिय टीमको लागि देख्ने सुअवसर पाउँछिन्। कुन्हाको परिवारका अन्य सदस्यहरू जस्तै उनी पनि खुशी भएकी थिई उनको छोराले राष्ट्रिय टीम खेलाडीहरू बीच एक राम्रो दर। Cunha उनी धेरै माया गर्छिन्, र उनीहरुका साथ राम्रा सम्झनाहरु छन्।
म्याथियस कुन्हाको बाल्यकाल उसकी आमासँग।
म्याथियस कुन्हा भाई बहनहरूको बारेमा:
यस स्ट्राइकरको केवल एक बहिनी छ। उनी एक मात्र भाई र बहिनी हुन् र उनको नाम मारिया हो। तपाईंले माथिको स्ट्राइकरको साथ उनको बाल्यकालको फोटो देख्नु भएको छ। तिनीहरू धेरै नजिक छन् र एक अर्कामा राम्रो रूचिहरू छन्।
LR: कार्मेलो, मारिया, लुजियाना, मटेओ र हजुरआमा।
मैथियस कुन्हा नातेदारहरूको बारेमा:
माटेओको नजिकको परिवारबाट टाढा, उसको विस्तारित पारिवारिक जीवनको बारेमा धेरै ज्ञात छैन। तपाईंले आफ्नो हजुरआमाको फोटो देख्नु भएको छ र जान्न उत्सुक हुनुपर्दछ कि यदि उनी आफ्नो बुवा वा आमा हुनुहुन्छ। हामी पनि त्यस्तै छौं। थप रूपमा, हामी उहाँलाई आफ्नो हजुरबा हजुरआमा, काका, काकी, काकी, भतिजा, भतिजा र भान्जीहरूबारे बताउन चाहन्छौं।
मैथियस कुन्हा व्यक्तिगत जीवन:
मैथियस कुन्हा पिचबाट टाढा छ? के उसको जीवन केवल अन्तिम डिफेन्डरको काँधमा खेल्न वरिपरि घुम्छ? हामी तपाईं को एक पूरा तस्वीर को लागी सक्षम गर्न को लागी अगाडि तथ्यहरु लाई ल्याउन को रूप मा फिर्ता बस्नुहोस्।
सुरु गर्नका लागि, म्याथियस कुन्हा सही मनोवृत्तिको साथ एक आनन्दित गो भाग्यमानी खुसी हो। ऊसँग जीवनको हरेक पक्षमा सकारात्मक दृष्टिकोण छ र राम्रो कम्पनहरू फराकिलो बनाउँछ। साथै, अगाडि गोप्य छैन। ऊ आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा तथ्य खुलाउन खुला छ। हामीले लेखेका टोन जिनियसलाई जस्तै, म्याथियसलाई पौंडी मन पर्छ। ऊ समुद्र किनारमा क्वालिटी समय बिताउँछ र यात्रा गर्ने आफ्नो शौक बनायो।
अगाडी आकर्षक आफ्नो मनपर्ने शौक को एक हेर्नुहोस्।
मैथियस कुन्हा जीवनशैली:
एक € 58,349 साप्ताहिक ज्यालाको खरीद शक्ति के हो? It. M मिलियन यूरोको शुद्ध सम्पत्ति कस्तो छ? तपाईंसँग त्यस्तो भुक्तानीको साथ प्राप्त गर्न योग्यको मानसिक तस्वीर हुनुपर्दछ। यो जर्मनी र ब्राजिलमा कार र घरहरू भन्दा पर जान्छ।
कुनहाले सबै माथि उल्लिखित छ र उसको स्वामित्वमा रहेको सबै पैसालाई के गर्ने भन्ने बारे घाटामा पर्छ। जे होस्, ऊ बुझ्दछ कि जीवन भनेको रमाइलो गर्नु हो र आफुलाई जीवित रहेको सुखलाई इन्कार गर्दैन।
हामी मद्दत गर्न सक्नुहुन्न तर उनको जेट र बच्चाको साथ निजी जेटमा बसिरहेको फोटोहरूको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ किनकि उसले उनीहरूलाई संसार देखाउँदछ। उनले स्पष्ट रूपमा उच्च वर्गका नागरिकहरूको जीवन बिताइरहेका छन् र हामी ती सबैको गवाही दिन्छौं।
सबैले निजी जेटमा यात्रा गर्न सकीन्छन् जस्तो उसले गर्दैन।
मैथियस कुन्हाको बारेमा तथ्यहरू:
माटेओको बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा यो लेख लपेट्न को लागी, उनको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरु।
तथ्य # 1 - वेतन र प्रति सेकेन्ड कमाई:
युरो मा कमाई (€)
प्रति वर्ष: € 3,034,148।
प्रति महिना: € 252,846।
प्रति हप्ता: € 58,349।
प्रति दिन: € 8,336।
प्रति घण्टा: € 347।
प्रति मिनेट: € 5.78
प्रति सेकेन्ड: € 0.09
तपाईले म्याथियस कुन्हाको हेर्न शुरू गर्नुभयो बायो, यो उसले कमाएको हो।
अगाडी एक इसाई छ। विशेष रूपमा, एक अभ्यास क्याथोलिक। जब उसलाई कुनै अन्धविश्वास छ भनेर सोधियो भने कुन्हाले जवाफ दिए कि:
“जब म पिचमा जान्छु, म घाँस छुन्छु र क्रसको स make्केत गर्दछु। साथै, म मरियम, येशूको आमा को ट्याटू चुम्बन। तिनीहरू सबै मेरो संस्कृति र धर्मका ट्रेसहरू हुन्। ”
तथ्य #3- फिफा २०२० रेटिंग्स:
Ha 80 को सम्भावितताको साथ कुन्हाको 87० अ of्कको समग्र मूल्या rating्कन छ। यद्यपि हामी विश्वास गर्न सक्दछौं यो एक अनुचित रेटिंग हो, यो याद गर्नु उपयुक्त छ रोबर्टो फर्मिनो / 86/86। हो। Lifebogger मा, हामी सल्लाह दिन्छौं कि युवा र सुपरस्टारहरू बीच कुनै तुलना हुनु हुँदैन। यद्यपि हामी मद्दत गर्न सक्दैनौं तर हामी यो कुराको प्रशंसा गर्न सक्दैनौं कि कुन्हा आफ्नो साथीलाई बराबर गर्नका लागि केवल केहि बिन्दुहरू हुन्।
खराब छैन तर आशाजनक।
तथ्य # १ - नेमारसँग सम्बन्ध:
तपाइँले अवलोकन गर्नु भएको छ कि अगाडि लगभग शेयर संग मिल्दोजुल्दो छ नेमार जूनियर फिजिक र सीप सेटहरूमा। हामीसँग पनि छ। तिनीहरू नजिकका साथीहरू हुन् र हामी उनीहरूको सम्बन्ध वर्षौं बित्दै जान्छौं। जब कुनहाले पहिलो पटक वरिष्ठ राष्ट्रिय टोलीलाई बोलाए, उनी एक व्हाट्सएप समूहमा थपिए जहाँ उनले पोस्ट गरे "म यहाँ छु खुशी छु"। नेमारले तुरुन्त जवाफ दिए 'स्वागत छ!' ऊ सँधै पीएसजी सुपरस्टारको साथ खेल्न स्वागत गर्दछ।
म्याथियस कुन्हाको बाल्यकालको कहानी र जीवनी मा यस जानकारीपूर्ण टुक्रा पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईलाई विश्वास गर्न प्रेरणा दिन्छ कि सपना र दर्शनहरू कार्यको समर्थन पाउँदा प्राप्त हुन्छन्। जसरी कुन्हाले युरोपमा खेल्ने सपना देखेका थिए र सपना प्राप्त गर्न धेरै मील यात्रा गरे।
अब हामी अगाडी मा आमा बुबा को आफ्नो शब्दहरु र कार्यहरु मा उनको क्यारियर को लागी समर्थन को लागी प्रशंसा को behooves छ। Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाइँ केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल सन्देश छोड्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: मैथियस सान्तोस कार्नेरो दा कुन्हा।
जन्म मिति: मे १ 27 1999। को २th औं दिन।
जन्मस्थान: ब्राजिलमा जोओ पेसोआ।
अभिभावक: लुजियाना (आमा) र Carmelo (बुबा)
Siblings: मारिया (बहिनी)।
फिटमा उचाई: Fe फीट
सेमी मा उचाई: 184 सेमी।
प्रेमिका / श्रीमती हुनु: गेब्रिएला।
बच्चाहरु: लेवी (छोरा)।
कुल मूल्य: १. 7.5 मिलियन यूरो